Muhiimadda xigta waxay kaliya u noqon doontaa iPhone ama sidoo kale barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro'? | Waxaan ka socdaa mac
Muhiimadda xigta waxay kaliya u noqon doontaa iPhone ama sidoo kale barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro'?
Peter Rhodes | | iPhone, Kombiyuutarada Mac
Waxaa jira kaliya hal bil illaa Apple uu bilaabo inuu na siiyo macluumaad ku saabsan alaabooyinka uu ka shaqeynayay bilaha. Bisha Sebtember waa la xusi doonaa la xigta Muhiim halkaas oo kuwa ka yimid Cupertino waa inay miiska garaacaan waxayna kuxirantahay waxay halkaas ka qabtaan in natiijooyinkooda maaliyadeed ay hagaagaan.
Hadda, waxa aan dhammaanteen la yaabanahay ayaa ah haddii aan dhab ahaan lahaan doonno Keynote diirada lagu saarayo oo keliya iPhoneka ama ma ka faa'iideysan doonaan si loogu soo bandhigo MacBook Pro Retina dib loo rogay oo leh muuqaal OLED ah.
Waxa Apple ay sameysay sanadihii la soo dhaafay ayaa ah inay u hibeyso Muhiimad kasta, iyadoo kuxiran waqtiga sanadka, wax soo saar xiddig leh isla markaana si hufan Khudbadda bisha Sebtembar diirada lagu saaray adduunka iPhone iyo wax soo saarka kale ee sare Sannadkan waxaa loo tixgeliyaa in Keynote waxaa la qabtaa Sebtember 7 sidaa darteed waxay ku beegan tahay magaca loo maleynayo inuu yahay iPhone 7 cusub iyo maxaa yeelay waa Arbaco.
Hadda, waxaa jira dhinacyo noo sheegaya ama Apple Keynote soo socdaa ma noqon doono maalintaas ama inaan diiradda la saari doonin oo keliya iPhone. Waxaan kuu sheegeynaa tan sababtoo ah isla maalintaas Sony waxay horey u shaacisay inay soo bandhigeyso konsoleheeda cusub sidaa darteedna waxaan wajihi doonnaa maalin ay warbaahinta teknoolojiyadda badan ka warqabaan taas, iyada oo lala wadaagayo caan ka ahaanshaha warbaahinta aaladaha ay Apple la soo bixi karto.
Ma aaminsani in Apple u dabaaldegayo Muhiim isla maalintaas shirkad kale, xaaladdan oo kale Sony, waxay soo bandhigeysaa badeecad muddo dheer la sugayay sida jiilka xiga ee konsoleheeda. Dhinaca kale, haddii aan u istaagno inaan eegno daadashada ka dhacday waxa iPhone-ka soo socda noqon doono, waxaan dhammaanteen garowsanahay in nashqaddeeda aysan isbadal weyn ku imaanaynin, taasi waa, inaannaan lahayn gabi ahaanba meel cusub oo dhammaystiran dhinacyadeeda, taas oo macnaheedu noqon karo in IPhone-ka uusan ahaan laheyn xudunta Muhiimka ah.
Haddii iPhone uusan ahayn xarunta Muhiimka ah, waxaa weli jirta suurtagalnimada in munaasabadda sidoo kale loo isticmaalo soo bandhigidda waxa noqon lahaa MacBook Pro Retina cusub oo leh shaashadda OLED ee shaqooyinka iyo naqshad cusub oo cusbooneysiisay. Waxay noqon laheyd markii ugu horeysay ee Apple ay sameyso wax sidan oo kale ah, taas oo ah, la wadaag Dood-wadaag labo shey oo kala duwan. Ma u malaynaysaa in Apple tan maskaxda ku hayso? Miyaad u maleyneysaa in Muhiimadda ay noqon doonto Sebtember 7?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Muhiimadda xigta waxay kaliya u noqon doontaa iPhone ama sidoo kale barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro'?
Patent-kii ugu dambeeyay ee Apple Watch wuxuu muujinayaa matoor hapt ah
Nuqulada 2 waxaa lagu heli karaa bilaash wakhti xadidan